कोरोनाको विरुद्ध संसार लडिरहदा मेरो देशले मलाइ झन् लात हान्छ भन्ने कुरा आज आभास भयो : नायीका नीता ढुंगाना – Sandesh Press
May 26, 2021 92
काटमाडौ । कोरोना संक्रमित भएका उनका साथी हरिहर अधिकारीका बुवाको उपचारका क्रममा निधन भएपछि नायीका नीता ढुंगाना निकै भावुक भएकी छन् । उनी हरिहरलाई दुखद् अवस्थामा साथ दिन पशुपति क्षेत्रमा पनि पुगेकी थिइन् । स्वास्थ्य मापदण्ड अनुसार हरिहरको वुवाको अन्त्यष्टि गरिएको थियो ।
त्यतीबेला नीताले भाव विह्वल भएका हरिहरलाई एक पल पनि छोडिनन् । उनले हरिहरको बुवालाई विदा गरेपनि निकै भावुक हुँदै स्टाटस लेखेकी छन् । उनले अहिले आफु नेपालमा किन जन्मिएँ होला भन्ने लागेको विचार ब्यक्त गरेकी छन् । सामाजिक सञ्जाल फेसवुकमा हरिहरका बुवासंगको तस्बिर राख्दै उनले लेखेकी छन्, मेरो देश मेरो गौरव भनेर सोच्ने मान्छे म, आज म किन यो देशमा जन्मिएँ होला जस्तो लागिरहेको छ ।
मेरो देशले मेरो रक्षा गर्न सक्दैन भन्ने कुरा आज आएर थाहा पाएँ । कोरोनाको विरुद्ध संसार लडिरहदा मेरो देशले मलाइ झन् लात हान्छ भन्ने कुरा आज आभास भयो । यो कठिन अवस्थामा जनताको लागि लड्नुपर्ने तर यहाँ त लडाइ कुर्सीको लागि भैरहेको छ । समयमा अस्पतालमा उपचार नपाएर आज मैले मेरो नजिकको अग्रज गुमाएँ ।
सायद समयमा नै आइसियुको व्यवस्थापन भएको भए र समयमा नै अक्सिजन पाएको भए कसैले पनि अल्पायुमा ज्यान गुमाउनु पर्दैन थियो होला । हार्दिक श्रद्धाञ्जली बुवा, हजुरको वैकुण्ठमा बास होस् !काटमाडौ । कोरोना संक्रमित भएका उनका साथी हरिहर अधिकारीका बुवाको उपचारका क्रममा निधन भएपछि नायीका नीता ढुंगाना निकै भावुक भएकी छन् । उनी हरिहरलाई दुखद् अवस्थामा साथ दिन पशुपति क्षेत्रमा पनि पुगेकी थिइन् । स्वास्थ्य मापदण्ड अनुसार हरिहरको वुवाको अन्त्यष्टि गरिएको थियो ।
सायद समयमा नै आइसियुको व्यवस्थापन भएको भए र समयमा नै अक्सिजन पाएको भए कसैले पनि अल्पायुमा ज्यान गुमाउनु पर्दैन थियो होला । हार्दिक श्रद्धाञ्जली बुवा, हजुरको वैकुण्ठमा बास होस् !
Prevकोरोनाको विरुद्ध संसार लडिरहदा मेरो देशले मलाइ झन् लात हान्छ भन्ने कुरा आज आभास भयो : नायीका नीता ढुंगाना
Nextयि चर्चित प्रहरी अधिकारीसँग विबाह गरिन् चर्चित अभिनेत्री आशा खड्काले
म्यादी प्रहरीको लागि भर्ना खोलिँदै : तलब र अवधि समेत बढाइने ?
आज अक्षय तृतीया अर्थात जौँको सातु खाने दिन, यी काम गर्दा मिल्छ लाभ
भर्खरै सम्पूर्ण काठमाडौंबासीका लागि आयो अत्यन्तै खुसीको खबर। (3606)
सुत्ने बेला किन ब्रा खोलेर सुत्ने? नखोल्दा के हुन्छ ? हरेक महिलाले जान्नै पर्ने ! (2913)
श्रीमानको बाँया तिर किन सुत्छिन श्रीमती ? जानी राखौ (1669)
मन्त्रिको गाडी समात्ने बहादुर प्रहरी, भन्छन- ‘ठूलो सानो भनेर जो कोहीको पनि छोड्ने कुरा हुँदैन’ (1575)
मोरङबाट आयो सबैकाे मन रूवाउने दुःखद खबर : पुरै गाउँ शो’कमा